I-Real Sex Doll Lifelike Thenga eshibhile ethengiswayo Onodoli Abathandekayo Abangokoqobo
Ukuthengiswa Okushisayo Kwempilo Yangempela Onodoli Bocansi
I-148CM Big Tits Brown Skin TPE Ucansi Wocansi
Isifuba Esiflatele Isigaxa Sobuso Bentombazane YaseJapan I-TPE Sex Doll
Iningi Elithengwe Ngosayizi Wempilo Olukhulu Olumisiwe Olukhulu lwe-148CM
Ukudlalwa Kwezinwele Ezinwele Zokudlala Izinwele Ezinkulu Zamehlo TPE
I-150CM B Cup Charming Elegant Companion TPE Sex Doll
Ukuthengisa Okungcono Kakhulu Onodoli Bocansi Bangempela
I-Akira - Dollhouse 168 Engatholakali Ikhanda EVO Version 150cm TPE Sex Doll
I-Agatha - 150CM D-indebe enombala weSikhumba TPE Sex Doll
Meroy - 166CM Silicone Head Cute Girl Japanese TPE Sex Doll for Men
UBernal - Big Ass Blue Eyes 151CM TPE Sex Doll
I-Belloc - 158CM Big Boobs Imilenze Engatholakali TPE Sex Doll
I-Setlla - I-148CM Engabizi kakhulu Yonobuhle Obuhle Bocansi
ISimona - 157CM Student B Cup Ibele Locansi
UDoria - 156CM Big Breast Cowboy Sexy Big Ass BBW Sex Doll
I-Rin - Dollhouse 168 Sexy Chinese Chinese Amabele Amabele Amakhulu Osisi
UJanet - 157CM WM B Cup Skier TPE Sex Doll
IHilary - 156CM Little Devil Exquisite Face WM Sex Doll
I-Valentine - 150CM Rose Goddess Brown Skin TPE Sex Doll
I-Olga - 158CM Big Boobs Brown Skin Eshibhile Ngodoli Wocansi
URaleign - Isikhulu Samaphoyisa Ase-158CM E Cup Amaphoyisa Asezingeni Elishushu
I-Annabelle - 172CM D-indebe WM NO.372 Inhloko Yesikhumba Esikhumba Esigcwele Umzimba
UMaria - 162CM E-indebe WM NO. 273 Inhloko Yesikhumba Esikhumba Sesikhumba Sezocansi
Torso Ukushaya indlwabu ngothando Onodoli
I-3D Adult Toy Solid Half Torso Male Legs 2 Hole Sex Doll
Yiluphi udoli wobulili besayizi obuhle kakhulu?
Ingabe unayo eyakho idoli langempela? Manje, bangumkhuba omusha eNyakatho Melika. Ukukhuluma ngonodoli, mhlawumbe uzoqala ucabange ngonodoli abangafuthwa. Kepha leso yisikhathi esidlule. Onodoli bakudala basungulwa amatilosi amaDashi ekhulu leshumi nesikhombisa leminyaka ababekwa eceleni ulwandle phakathi nohambo olude. Bathola ukuthi ingahlangabezana nezidingo zabo ngezindlela ezithile. Enziwe ngezindwangu ezithungiwe noma izingubo ezindala, laba onodoli bokushaya indlwabu bangabanduleli abaqondile bonodoli banamuhla bezocansi. Vele, ngokuthuthuka kobuchwepheshe, basondela kubantu bangempela. Eminyakeni yamuva nje, iqembu labakhiqizi, eliholwa ama-urdolls, likhiqize onodoli bakamuva ngokudlala bukhoma. Njengamanje, lo doli uthandwa kakhulu eNyakatho Melika naseYurophu.
Ngaphambi kokuthenga owakho udoli. Kufanele wazi imininingwane ethile ngodoli abasha bezocansi. Iwebhusayithi yethu iqukethe cishe zonke izinhlobo zonodoli bangempela. Onodoli base-Asia kungenzeka kungenxa yesimo sabo esincane noma ukumamatheka okungenacala okwenza amadoda anegazi elishisayo alangazelele uthando. Noma mhlawumbe ufuna ukuba nomuntu okhangayo futhi ongaziwa Unodoli wezocansi waseJapan. Kungaba yinganekwane yakho ye-anime ebusheni bakho. Lapha sizofunda ngomlando wonodoli, izinketho zamanje emakethe kanye nezinketho ezahlukahlukene lapho ukhetha unodoli.
Kusukela ngo-2012, onodoli bezocansi abangena emakethe baye bathathelwa indawo onodoli be-TPE nodoli abicah. Izisetshenziswa ze-Thermoplastic elastomer ezibizwa nge-TPE zivame ukusetshenziswa, ikakhulukazi ngoba unodoli wezocansi ongokoqobo eyenziwe ngabakhiqizi ingcono kunekhwalithi ephezulu. Kushibhile ukwenza amathoyizi enziwe nge-silicone ebilisiwe ye-platinum. Abanye abakhiqizi bakanodoli banamuhla bangeze uhlelo lokushisa lwangaphakathi kumadoli abo abicah.
Onodoli be-TPE nodoli abicah ngamunye banezinzuzo zabo. Izinto ze-TPE zishibhile. Intengo yodoli wocansi wentombazane wangempela owenziwe ngezinto ze-TPE iphansi kunentengo yodoli abicah. Ukuqina nobumnene nakho kuhle. Izinto ezenziwe ngabicah ziyabiza kakhulu, kepha onodoli abicah baqina kakhulu futhi basondelene kakhulu neqiniso. Onodoli abicah ekuqaleni babenziwe nge-silicone engelisiwe ngothini, kepha ubuchwepheshe beplatinamu bunempilo ende yokusebenza futhi abuthambekele ekuklebhuleni nasekwazisweni.
Abathandi bonodoli bangempela bezocansi bangakhetha ama-brothels angama-70 eJapan bese bekhetha indawo yokuqala yokudayisa ngomzimba enjalo eYurophu ngoMashi 2017. Ngokombono wabaphathi, onodoli bangabasebenzi abalungile, bahlala belapha ngoba abaze bagule, bahlala bebukeka kahle, banikela ngazo zonke izimbobo ezintathu, akukho zikhalazo noma imali eyengeziwe. Ezinye izinkampani zisebenzisa ubuchwepheshe obufanayo nokwenza amathoyizi amahle ukwenza onodoli be-rag. Ngokusetshenziswa okubanzi kwamasiko kwe-Intanethi yisizukulwane esisha, kunezithangami eziningi zezimfundamakhwela ezisebenzisa indwangu noma ezinye izinto ukuzenzela zona unodoli wezocansi oshibhile.
Ngokuthuthuka okuqhubekayo komphakathi, abantu bebelokhu befuna izindlela zokujabulela impilo kangcono. Indlela yokuzijabulisa nayo iye yanda kakhulu. Onodoli bezocansi abasezingeni eliphakeme bangezinye zezinto ezisungulwe kakhulu ngempucuko yabantu. Usayizi ogcwele, izidalwa zokwenziwa ezicebile, umsebenzi wazo omkhulu ukwanelisa izifiso zabantu zocansi. Ukuthenga nokusebenzisa onodoli namuhla kuya ngokuya kwanda, njengoba ongqingili benamalungelo abo. Abanye ngeke babe nobungane kuwe ngoba usebenzisa unodoli wezocansi. Okufanele ukwazi ukuthi leli yilungelo lakho.
Okwanda kwabantu. Babukeka njengabesifazane bangempela. Ungaphila amaphupho akho amabi kakhulu - ngesinye sezidoli zethu ezingokoqobo zocansi, ungakulethela izikhathi zakho ezijabulisa kakhulu. Babukeka njengowesifazane wangempela futhi bazizwa njengowesifazane wangempela. usayizi ogcwele wonodoli manje usufana nempilo. Ngoboya bayo bomuntu, isikhumba esithambile, izici zobuso ezingokomzwelo namajika ayengayo, kubukeka cishe kungahlukaniseki kowesifazane wangempela lapho uthi nhlá. Onodoli abasebenza ngosayizi wokuphila baklanywe ngokucophelela futhi balingiswa ngabantu bangempela.
Uma ufuna ukuthenga thenga onodoli bezocansi bangempela besilisa, yeka ukubabuka ngoba usendaweni efanele. Kusukela kumadonki amancane nethenda kuya kwesikhulu futhi kunabise onodoli bamathoyizi ocansi abanengqondo kunazo zonke: kukhona zonke izinhlobo zokunambitheka ebangeni lethu! Wonke umuntu angathola idoli lakhe alithandayo, kunamamodeli amaningi ahlukile, ahlukile ezintweni ezibonakalayo, imishini nokubukeka. Ngonodoli bezocansi, ungazama izikhundla ezahlukahlukene. Ngakho-ke, kuthathwa njengohlobo lokuqeqeshwa.
Onodoli Bokufika Abasha Bayathengiswa
I-Piper-The Doll Doll Ngezinwele Ezinde Ezimnyama Namehlo Amakhulu WM Uyakuqabula Ngodonga
UCamille akakwazi ukukhohlwa amasokisi akho amnyama nezithende eziphakeme ezibomvu uyakuthanda unodoli
i-crystal-163cm C-cup ye-Doll Doll Emile Ezitebhisini Ezikulungele Ukudansa Nawe
I-winni-unodoli wezocansi ogqoke isudi emhlophe ehleli eceleni kombhede ukubukeka okuthandayo
ICordelia-WM Blonde Izinwele amabele amakhulu M-cup150cm Cute And Charming Face Sex Doll
Uchungechunge Olufakiwe Oluhle Lamadoli Ocansi
UJessica - Dollhouse 168 E Cup EVO Edition 150CM Sex Doll
UJessica unaka kakhulu ukunakekelwa kwezinwele. Indlu yokugezela ekhaya ine-conditioner ekhethekile esezingeni eliphezulu ne-shampoo, futhi ivame ukuya endaweni yokucwala izinwele. Ekuqaleni, isitayela sezinwele sasishintshwa njalo ngenyanga. Isitayela esifanayo sezinwele besingahlali izinyanga ezintathu, kepha ngaso sonke isikhathi sasiyizinwele ezinde ngesikhathi esithile. Uma ufuna umsebenzi wokushaya ngamandla kagesi, naye unawo. Ngokuziqhenya uzogibela iqhude lakho eliqinile futhi alimunce. Anginayo i-reflex yokuhlanza. Kusukela esithweni sowesifazane sangasese esiphuciwe kuya embongolweni enhle, ungathatha noma yini ongayenza uma ufuna. Uyazi ukuthi uzungeze kanjani indoda nendlu yokulala. Uthanda izinto ezinhle, futhi uvame ukubheka phambili ekubonakaleni kwePrince Charming. Ubheke kakhulu othandweni lwezothando. Isimo sentombazane encane sihle kakhulu. Ubuntu bakhe bunentokozo, kepha ubuntu bakhe bokudangala busekhona. Futhi abantu abanaki futhi kaningi benza izinto ezingalungile. Ungudoli wezocansi ongokoqobo onekhanda nomzimba ongasuseki.
Rin - Dollhouse 168 Sexy Chinese Chinese Amabele Amakhulu I-TPE Sex Doll
URin ungumShayina. Unamabele amakhulu we-F-cup amakhulu. Abantu abaningi abakwazi ukuzibamba kepha bafuna ukuyikhotha. Uyashesha, ulungile, mhlawumbe ubanda kakhulu. Lokhu kuvame kakhulu kubangani abaseduze kwakhe. Wazalelwa emndenini ojwayelekile enhloko-dolobha. Ubelokhu eyintombazane ezimele kakhulu. Wahamba ekhaya waze waba neminyaka eyi-15. Qala ukufuna impilo oyilangazelelayo. Lapho esehambile, wahlangabezana nezingqinamba eziningi. Kodwa akazange aphele amandla. Ngobuhlakani bakhe nangomdlandla wakhe, akukho okungamvimba ukuthi afinyelele ebangeni lakhe eliphelele. Maduze nje uzoba ngamandla okumele abhekwe nawo.
I-Athena - C Cup Isinqe Esincane Izinwele Ezimfushane 165CM Usayizi Ogcwele Wodoli Wocansi
U-Athena uvela eJalimane. Ungunodoli ogcwele ngokugcwele onomzimba omuhle. Isinqe sakhe sincane, okwenza amabele nezinqe zakhe kubukeke kumangalisa ngokwengeziwe. Bheka ubuso bezingelosi, amehlo anozwela, vumela amehlo akho alahle amathambo akhe amade esihlathi namakhala amahle avela ezindebeni zakhe ezithambile, entanyeni e-sexy naku-clavicle eveziwe. Ukukhuluma ngasese, iphupho lakhe liphucwa konke. Udinga indoda enamandla kuphela ezomnakekela futhi ahlangabezane nayo nezidingo zocansi ezingagculiseki. Unomzimba okhangayo omvumela ukuba aphathe indlu yonke ngoba ungajabulela intelezi ekhangayo evela kuzo zonke izinhlangothi. Uma ufuna ulwazi lomuntu siqu kakhulu lomlingani wakho, khona-ke unodoli wangempela uyisinqumo sakho esingcono kakhulu. Ijoyini eliguquguqukayo limboza uhlaka lwensimbi kanti i-TPE ethintekayo inikela ngemiphumela emihle kakhulu.
Kungani uthenga kithi?
Sinikeza amakhasimende ngensizakalo yokuthenga ebushelelezi ukusiza amakhasimende ukuthi azitholele onodoli bawo abenelisayo. Uma unanoma yimiphi imibuzo mayelana nonodoli bezocansi, sizokuphendula okokuqala. Onodoli baphephe kunobulili bangempela, akudingeki ukhathazeke ngokukhulelwa noma izifo ezithathelwana ngocansi!
Ama-URDOLLS azibophezele ekwenzeni onodoli be-ultra-reality. Onke onodoli benziwa ngokusho kwabantu bangempela. Ababazi bethu bezithombe baneminyaka engama-30 yokuhlangenwe nakho kokumodela. Ubuso bonodoli ngamunye nayo yonke i-intshi yesikhumba esibunjiwe kuqoshwe inkosi. Izinga lokulingisa liphakeme ngama-98% noma ngaphezulu. Ngaphezu kwalokho, inesitho esinengqondo kakhulu futhi esisondelene nokufana kokuthungwa okuyiqiniso kwe-99% noma ngaphezulu, okunikeza umuzwa wokuthi ufana nomuntu wangempela. Siyaqiniseka ukuthi sikunikeza insizakalo enhle kakhulu kanye nokuhlangenwe nakho okuhle kakhulu komsebenzisi.
Sizobamba imicimbi yezitolo kuyo yonke imikhosi. Ukuletha okunikezwayo okuvulekile kubasebenzisi. Lapho sibambe iphromoshini, ungasebenzisa ikhodi yekhuphoni ukwenza ukuthenga. Thola okunikezwayo ngomsebenzi. Uma u thenga onodoli bezocansi phakathi nomcimbi, imvamisa ikongela imali eningi.
Sinezobuchwepheshe bokukhiqiza obuthuthukile futhi obuyingqayizivele, kanye neqembu eliqinile labaculi bezimonyo elakhiwe ngabasiki abanekhono, onjiniyela kanye nezifundiswa. Enqubeni ngayinye yokukhiqiza, sinezidingo eziqinile kakhulu nokulawulwa kwekhwalithi ukulwela ukuphelela. Ikuvumela ukuthi wenze ngokwezifiso lo nodoli osezingeni eliphezulu wezingxenye ezahlukahlukene zomzimba-uqinisekise ukuthi uhambelana nomfanekiso wentombazane oyiphupha.
Onodoli bethu babukeka bengcono, bazizwa bengokoqobo ngokwengeziwe, futhi bahlala isikhathi eside! Kulula kanjalo. Unodoli ngamunye wama-urdoll unenkundla enemininingwane eminingi yezocansi. Isikhumba sabo sinwebeka kakhudlwana. Isibonelo, isifuba sinyakaziswa ngokujabulisayo. I-TPE / abicah inokuqina okuphezulu futhi kukhulisa impilo yedoli.
Onodoli bethu benziwe nge-TPE noma izinto ze-silicone. Idizayini ekhethekile yesizukulwane esisha sensimbi engagqwali ephezulu ecacisa amagiya ama-rotor afana nomzimba womuntu ohlangene namathambo. Kungenza ukwakheka okuhlukahlukene nokunyakaza okufana nabantu bangempela, okuqinile, okungelula ukugqoka nokuxegiselwa. Ubuchwepheshe bokucwaninga besayensi obuthuthukile nobungcweti obuphelele ukukhiqiza onodoli abasezingeni eliphakeme. Khulisa kakhulu isipiliyoni sekhasimende.
Zonke onodoli esitolo sethu zenziwa ngokuya ngesilinganiso sabantu bangempela. Ngempela zingosayizi womzimba womuntu. Ngeke umangale ngalokhu, uzocabanga ukuthi bangabantu abaphilayo. Unesiqinisekiso sekhwalithi.
Unodoli wethu uqukethe uhlaka lwensimbi ngaphakathi. Kulula ukumiswa nokugqoka, yize isikhumba sabo esithambile sithinteka ekucindezelekeni ngokweqile. Izilinganiso zabo ziphila isikhathi eside kunezinye onodoli. Kungakho benqoba abantu abaningi. Ithambile futhi iyabiza. Kuthambile futhi kunwebekile, uzothola ukuthi isifuba nezinqe zikanodoli zijika kalula lapho emuphulula emuva nangaphambili.
Lapho wenza unodoli wakho ngokwezifiso. Ungaxhumana nathi ukuthola usizo nge-imeyili. Lapho unodoli uthunyelwa, sizokuthumela inombolo yokulandelela, futhi sisebenzisa iFedex ne-DHL ukusheshisa ukuthunyelwa nokuqinisekisa ukulethwa okuphephile. Futhi sithatha ubumfihlo bakho ngokungathi sína, ngakho-ke ngeke kube khona amalebula ebhokisini, noma ngabe igama lenkampani yethu lingaveli. Inqubo yokukhiqiza onodoli imvamisa ithatha izinsuku ezi-3 ukuya kweziyi-8 ukuqeda. Ngakho-ke unodoli wakho kufanele afinyelele lapho aya khona ezinsukwini eziyi-8-20 ngendlela esheshayo yokukhiqiza nokuthumela emhlabeni.
Sinikeza izinketho ezahlukahlukene zamahhala kumakhasimende ethu, ukuze ukwazi ukukhetha isitayela osithandayo ngokukhululeka. Ungakhetha isithandwa esiphelele osicabangayo ngokuya ngezigaba ezahlukahlukene zonodoli kuwebhusayithi. Izinketho zodoli ngokwezifiso.
Onke onodoli bethu bangakhethwa ngokuya ngokuthanda kwakho (kufaka phakathi ukuphakama, izinwele, umbala wesikhumba, amehlo nezinye izinto eziningi). Zakhele owakho udoli okhethekile. Uma ungasitholi isitayela esigculisayo, sicela uxhumane nathi nge-imeyili noma ngocingo, sizokunikeza impendulo egculisayo.
Amasistimu wethu we-backend avikelwe futhi sisebenzisa i-Paypal ukuqinisekisa ubumfihlo bakho nokuphepha. Akukho lutho kusikweletu sakho olwembula uhlobo lokuthenga kwakho.
Bonke onodoli bezocansi esitolo sethu bahanjiswa mahhala. Futhi ingathunyelwa kuwo wonke amazwe emhlabeni. Intengo oyibona kuwebhusayithi iyinani eliphelele olidingayo ukuze ube ngumnikazi wedoli. Ngeke sikukhokhise imali eyengeziwe. Izindleko zokuthumela ezidingekayo ukuhambisa onodoli zonke zithwalwa yithi.
Onodoli bezocansi sebebe yigugu elibalulekile phakathi kwethu, futhi empeleni zingenye yezindlela eziphumelela kakhulu nezenelisayo zokuthuthukisa ubudlelwano phakathi kwabantu nenjabulo ephelele empilweni yezocansi. Ngokuthuthuka komphakathi, abantu baye bathola kancane kancane okunye ukusetshenziswa konodoli. Zisetshenziswa kakhulu ekufundiseni izingane ngezocansi. Onodoli bangasetshenziswa njengama-mannequins kumamodeli wobuciko bomzimba nasekufundiseni kwezokwelapha. Abesifazane abahle bavame ukusetshenziswa njengama-mannequins embonini yezemfashini. Vele, abantu abaningi basebenzisa onodoli ukuthatha izithombe nokuqoqa. Iningi lonodoli kungenzeka lingasetshenziselwa izinhloso zocansi.
Udinga ukuthola ukuthi ungowakuphi bese uhlala phansi. Akunandaba ukuthi hlobo luni losizo oludingayo, impilo yezocansi kanye nezidingo zobudlelwano bezocansi, onodoli bangakusiza ngezindlela eziningi. Jabulela ukuphequlula ngokukhetha kwethu okusezingeni lomhlaba, sinodoli bamathoni ehlukene esikhumba, izinwele nobuzwe. Ngokuzayo, sizobona unodoli wezocansi ongokoqobo onobuhlakani bokufakelwa, okulindeleke ukuthi ubalethele imizwa efana neyomuntu. Mhlawumbe ngokuzayo wonke umuntu uzoba nodoli ohlakaniphile ekhaya.
Siyajabula kakhulu ukukulethela unodoli onenani lentengo, onemininingwane, wekhwalithi ephezulu noma unodoli we-TPE. Ngemuva kokwenza isinqumo esikhulu sokuba nodoli wakho wezocansi, udinga ukwazi okuthile ngodoli nezinye izeluleko nemihlahlandlela yokuthola onodoli abahamba phambili. Siyayikhathalela injabulo yakho. Imikhiqizo yethu ingonodoli abasezingeni eliphakeme kakhulu futhi abangabizi kakhulu emakethe namuhla, futhi amanani abo afinyelele ezingeni lekhwalithi nemininingwane esiyikhiqizayo ngentengo enhle kakhulu. Sizibophezele ekuqhubekeni sithuthukisa imizwa yangempela yamadonki futhi sinikeze amanani ancintisanayo odoli abahamba phambili. Siphikisana nama-fakes nama-surcharges aphezulu.
Onodoli bezocansi ababiza kancane bayangena futhi bangasebenzisa umoya. Ngenxa yenani elifanele, amakhasimende amaningi azimisele ukunganaki ububi bawo. Kepha ngemuva kokusetshenziswa okuncane, bavame ukuqhekeka ezinhlangothini. Maphakathi nohlu lwamanani emakethe, onodoli benziwa nge-vinyl ejiyile noma nge-latex esindayo. Onodoli ababiza kakhulu bavame ukwenziwa nge-silicone noma i-thermoplastic elastomer. Onodoli abenziwe ngezinto abicah bangaba ngokoqobo impela. Njengodoli womkhiqizo we-GYNOID Doll, ulingiswa kumuntu wangempela, unesikhumba esisebenzayo (esifana nesikhumba esisetshenziselwa imiphumela ekhethekile yama-movie), futhi unezinwele eziseduze (noma zangempela).
Khetha onodoli abaqinile
Ngokubona kwami, impilo ingamahla ndenyuka. Ngemuva kokuzwa ukulahleka komkhombe, sengazi okuningi ngokuthokozela ukukhuphuka kuvuthondaba. Konke okudingeka ukwenze ukuthola unodoli owenziwe ngezifiso. Qiniseka ukuthi izinwele, isikhumba, amehlo, izindebe nezinye izinto zikadoli wakho zenzelwe ngokucophelela ukuveza ukubukeka nokuzizwa ngangokunokwenzeka. Ungaqala ukunxanela umuzwa we-orgasm yangempela, ukukhala okukwenza uzizwe wanelisekile. Qiniseka ukuthi unodoli wakho wezocansi wenziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme. Kungakhathaliseki ukuthi uyi-TPE noma i-silicone.
Endleleni, mhlawumbe uzoba ongenamandla futhi onomusa, futhi kuzoba khona izinyembezi nokukhala. Kepha zizohlala zikhona izikhathi ezinjalo, unodoli uzokulethela imizwa emangalisayo futhi anikeze ukushaya kwenhliziyo okuhlukile nokuthinta impilo ejwayelekile. Udinga futhi ukucabanga nge-fetishism yakho lapho ukhetha. Uhlobo luni lwesitayela oluthandayo. blond? Ibele elikhulu? Imbongolo enkulu? Ukunambitheka kwawo wonke umuntu kwehlukile. Ukukhetha esikunikezayo kulungile kumakhasimende ethu. Ekugcineni ungacabanga ngebanga lentengo. Kungumqondo omuhle njalo ukufaka imali eyengeziwe kuwe ukuze ugcine ukuthula kwangaphakathi nokwaneliseka kwezocansi. Ngeke sikuvumele ukhokhe ngaphezulu. Izindlela zokukuvumela uthokozele ucansi ngangokunokwenzeka, kepha inani ngeke lonakalise imali yakho. Eqinisweni, onodoli bangakusiza ugcine umshado wakho noma impilo yengqondo.
Lab 'onodoli kulula ukugqoka nokugqoka, yize isikhumba sabo esithambile sithinteka ekucindezelekeni ngokweqile. Isikhumba naso sinamabala kalula ngodayi, ngakho-ke kunconywa ukuthi ugqokise kuphela unodoli wakho umhlophe. Onodoli bangasiza abantu abanamakhono onke, abantu abangakwazi ukwanelisa isifiso sobulili esiqinile ebudlelwaneni obujwayelekile, abantu abanezifo ezithathelwana ngocansi noma abazesabayo, abantu abafuna ukugcina ubudlelwane nabalingani abanokukhubazeka ngokocansi, futhi bathole okuningi empilweni yabo yezocansi Shintsha nentokozo. Zingasetshenziswa njengezinto zokuzilibazisa noma ngezinjongo zebhizinisi. Ngakho-ke, onodoli akuzona nje izinto zokudlala zabantu abadala. Kuya ngenhloso ofuna ukuthola ngayo onodoli bezocansi noma amathoyizi ocansi kusuka kuzinto zokwakha, ezinye izindlela, futhi ungakhohlwa ukubukeka. Zithande kungukuqala kokuthandana impilo yonke. Abantu abaningi balwela abanye kukho konke ukuphila kwabo. Usizi nenjabulo, njengamanzi okuphuza, iyakwazi ukufudumala nokubanda. Zinike ithuba lokuphila wena! Ukuthenga onodoli, ungaphila kahle.
Okwakho, okuhlangenwe nakho kuyisihluthulelo, futhi ulwazi lonodoli lwezocansi luzokukwenza uncenge kakhulu nsuku zonke! Ukwaneliseka igama eliphakathi ledoli. Bheka kahle umzimba wakhe bese ungitshela ukuthi yini oyibonayo. Onodoli bangaletha izinzuzo eziningi kwabesilisa nabesifazane abangashadile ngisho nemibhangqwana. Abesifazane abaningi bathenga onodoli bezithombe, ukuhlobisa noma isitayela. Amanye amakhasimende anozakwethu, kepha abuye asebenzise onodoli bezocansi ukuzama iphupho ngaphandle kokulimaza amanye amahafu amabili. Ngaphezu kwama-orgasms enza abesifazane bahle futhi bahehe, futhi bajabulise ngokwengeziwe ngokomoya, abesifazane abavame ukujabulela i-orgasm abakwazi ukulinganisela kuphela uhlelo lwamahomoni ezocansi, kepha futhi baqinisa nokuzivikela kwabo. Ingozi yomdlavuza webele nowesibeletho nayo iyanda Incane kakhulu. Ngalezi zikhathi, abantu abasadangele, abasasabi, balalele izwi labo langaphakathi, babe yibo uqobo, bangayekethisi, basuse konke ukukhathazeka emhlabeni wangaphandle, futhi balahle konke ukungabaza ngabo uqobo.
Ukunikeza ngezinketho ezingapheli zonodoli abasezingeni
Kungani ukuqoqa onodoli bezocansi abangempela luthando lweqiniso
Abathandi bathola uthando lweqiniso kunodoli bezocansi baseJapan
Le webhusayithi iqukethe izinto zabantu abadala futhi ilungele kuphela leyo minyaka eyi-18 noma ngaphezulu. Chofoza u-Enter kuphela uma okungenani uneminyaka engu-18 ubudala.